Fahafahana lavitra amin'ny fampielezam-peo taorian'ny famokarana - NAB mampiseho ny vaovao amin'ny Broadcast Beat, ny fampielezam-peo ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Content Management » Fahafahana an-tserasera amin'ny fampielezana ny famoahana lahatsoratra
Fahafahana an-tserasera amin'ny fampielezana ny famoahana lahatsoratra
OpenDrives Miovaova ny workflows amin'ny fampitomboana ny vokatra
Ny tombony tsy azo lavina amin'ny fampielezam-peo mivantana dia ao anatin'ny tsy fahombiazany. Ny olana tokana dia ny fomba amam-panao nentim-paharazana amin'ny endriny nentim-paharazana izay mety kokoa amin'ny famokarana teatra dia tsy fomba mahomby indrindra hahatonga izany hitranga amin'ny hetsika fivoriambe lehibe. Avy amin'ny fomba fiasa ara-teknika momba ny workflow, ny sary mivantana mivantana dia maka sary amin'ny fampiasana fitaovana eo an-toerana ary avy eo dia mamelona izany votoaty izany ho an'ny mpihaino miaraka amin'ny fividianana kely na tsy mihoatra ny famokarana (toy ny fanitsiana na fanitsiana loko). Miaraka amin'ny famokarana taorian'ny famoahana dia tonga ny lohan'ny fotoana ahafahan'ny mpamorona miditra amin'ny votoaty, manatanteraka ny asa orinasa ilaina na maniry, ary manamboatra ny votoatiny manokana ho an'ny fizarana any ivelany. Miaraka amin'ny asa sy ny foto-drafitr'asa mahomby, anefa, dia afaka mampihena be ny fotoana hanamboarana azy.
OpenDrives dia nandray anjara tamin'ny hetsika maromaro izay nanohitra anay hanamora ny fanodikodinam-panafana amin'ny famokarana manaraka ho an'ny hetsika mivantana. Ao amin'ny BlizzCon tamin'ny faran'ny 2018 dia nanampy tamin'ny fitaterana ny iray amin'ireo fanampim-pampitam-baovao mahaliana indrindra amin'ny hetsika izay nanamaivana ny tsy fahombiazan'ny logisticals teo an-toerana, izay Post Hub izay nanamora ny famokarana orinasa afovoan-dàlana. Raha tokony ho ny dingana rehetra amin'ny fanaovana ny endriny samirery eo amin'ny sisiny, ny dingan-dabozia rehetra dia nanampy ny votoatin'ny kodiarana - mankany amin'ny Hub afovoany izay natsangan'ny vahaolana natsangan'ny OpenDrives avo lenta, izay ahitana ny OpenDrives Ny rafitra Apex sy ny rafitra fiarovan-tenan'ny OpenDrives Summit. Ireo mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny Post Hub dia niasa tao amin'ny dobo lehibe ao afovoan-tanàna izay hita ao amin'ny tranokala OpenDrives, ary nanatontosa haingana ny famokarana taorian'ny famoahana farany talohan'ny famaranana farany tamin'ny famoahana isan-karazany.
Ho an'ny Grammys tamin'ity taona ity, dia nanamboatra fitaovana maoderina izahay ary nandefa ny zava-drehetra any amin'ny trano efa-borona izay misy ny fitaovana rehetra. Amin'izany fomba izany, ny famokarana finday dia mety hivezivezy, raha toa kosa ka ny fanavaozana ny foibe dia miverimberina any amin'ny toby. Ity faratampony ity dia sarotra kokoa ary koa ny fiantohana ny fahombiazan'ny vokatra, ny taham-pahavitrihana ary ny fahamendrehana. Ny firaketana rehetra sy ny VOD dia voatahiry ao amin'ny rafitra OpenDrives Apex eo an-toerana, izay ny vahaolana amin'ny endriny avo lenta rehetra. Ny fametrahana ordinatera natokana ho an'ny ordinatera dia namoaka ireny tahiry ireny ary nanolo-tena ho azy ireo ho an'ny horonan-tsary sy ny feo "loha sy rambony". Vantany vao tafahaona, dia namoaka an'ireny rakitra ireny ny workflow ary nametraka azy ireo avy amin'ny toerana ao amin'ny Foiben'ny Staples amin'ny tambajotra voatokana ho an'ny toerana iray any Marina del Rey. Tamin'ity indray mandeha ity, nahitam-bokany ny tonian-dahatsoratry ny editors, nahavita QC ary farany ny fanitsiana, namoaka fichiers, ary avy eo namoaka ny votoaty tamin'ny alalan'ny fantsona sy endrines samihafa, toy ny tranonkala Grammys. Io no fifangaroan'ny teknôlôjia, automatisation ary fanitsiana famoronana.
Ho an'ny hetsika misy ankehitriny tahaka ny NBA farany, The US Open (Fox Sports), dia nahavita fahombiazana bebe kokoa izahay noho ny fihenan'ny fotoana fametrahana. Ny US Open amin'izao fotoana izao dia nanolotra OpenDrives mba hahazoana horonantsary 10 avy amin'ny rakitra 720P DNX100 (ahitana an'i Venice, RED, ary ny F55) mandeha amin'ny tonian'ny 5 sy ny mpitantana ny media 2. Ny fangaroan'ny 4x10Gbps dia mamely ny OpenDrives amin'ny 400MB / s amin'ny tahiry. Nalefanay vahaolana momba ny fitahirizana nandritra ny ora maro, fa tsy andro. Na dia eo aza ny fahamendrehan'ny fananganana, ny vahaolana fitahiranan-tsika dia manome antoka ny haavon'ny fahombiazana sy ny fampitomboam-pahefana hanohanana ny fangatahana ireo hetsika mivantana ireo ary ahafahana mamokatra vokarin'ny famokarana mahomby amin'ny famoahana ny votoaty nivoaka avy amin'izy ireo.
Mpanjifa mpamokatra - Desambra 10, 2019
TOROHEVITRA FAMPISEHOANA - CINEMA / FAMPIANARANA VIDEO - Desambra 10, 2019
Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie fampitana injeniera fampitana Engineering Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia Fampitana-SocialMeida Cobalt Encoder fanovana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor SJGolden - Spears & Arrows The Colonie Ny Colonie - News THE COLONIE / Chicago TVU Networks Video injeniera	2019-06-14
Previous: Ny Areia Creations dia mamokatra horonantsary KPOP Music with Blackmagic Design Cameras, Blackmagic RAW sy DaVinci Resolve
Next: Ny fametrahana ny workflows amin'ny tranonkalan'ny webcasting indrindra amin'ny Matrox® Monarch EDGE